‘नेपालगन्जमा पहिले नै ढिला भयो, अहिले परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन’ – Health Post Nepal
‘नेपालगन्जमा पहिले नै ढिला भयो, अहिले परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन’
२०७७ वैशाख २३ गते १६:५७
कोरोना संक्रमणको नयाँ ‘हटस्पट’ नेपालगन्ज बनेको छ। शुक्रबार पहिलो संक्रमित देखिएका थिए। त्यसपछि मंगलबारसम्म नेपालगन्जको एउटै टोलमा २३ जना संक्रमित पुगिसकेका छन्।
भारतसँग सीमाना जोडिएको पश्चिम नेपालको ठूलो नाका रुपडिहा भन्सार पनि त्यहीँ छ। भारतबाट प्रदेश ५, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशको समेत मुख्य प्रवेशद्वार नेपालगन्ज नै हो।
त्यसैले यहाँ यस्तो संक्रमणको ‘अनुमान’ त पहिलादेखि नै थियो।
नेपालगन्जमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा हेल्थपोस्ट नेपालका यज्ञराज जोशीले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरसँग कुराकानी गरेका छन्:
अहिले नेपालगन्जको ताजा अवस्था के हो?
आज ११ बजेबाट उपमहानगरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सुरक्षाकर्मी बाक्लो रुपमा परिचालन भएका छन्। तीन दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी रहनेछ। आज विहान ११ बजेसम्म सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सामान खरिदका लागि पसलहरू खोलिएका थिए।
बिहान त्यसरी पसल खोल्दा उपभोक्ताको भिड लागेको थियो। भिडलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा त्रिभुवन चोकामा प्रहरीसँग केही बेर झडपसमेत भएको थियो। प्रहरीले केही छिनमै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। अहिले अवस्था सामान्य छ।
नेपालगन्जका बारेमा बाहिर विभिन्न खाले हल्ला आइरहेका छन्। खास कुरो के हो?
तपाईंले भनेजस्तै बाहिर विभिन्न कुरा आइरहेको समयमा ग्राउन्ड लेवलमा त्यस्तो विकराल अवस्था भने छैन। यो सबैले संयम हुनुपर्ने बेला हो। हल्लाखल्ला गरेर त्रास फैलाउने भन्दा पनि वास्तविक कुरालाई सही रुपमा सम्प्रेसण गर्नुपर्छ। ग्राउन्ड लेवलमा म घर बसेको छु भने मेरो घरमा खाना आउनुपर्यो। मैले भोकै मर्ने अवस्था नआओस् भन्ने चिन्ता छ।
अर्को कुरा संक्रमित भएकाहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पनि हामीले ट्रेसिङ गरेर चेकजाँच गर्न सकिहरेका छैनौं। किनकी हामीसँग किटकै अभाव छ। शुक्रबार १५ जना भेटिए, सात जना आजै भेटिए। उनीहरूको सम्पर्कमा भएकाहरूको चाँडोभन्दा चाँडो ट्रेसिङ गरेर जाँच्नुपर्छ। तर, सामग्री अभावले अहिले निकै समस्या भइरहको छ। उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूले हाम्रो पनि जाँच गरिदिनुपर्‌यो भनिरहनु भएको छ।
केन्द्र सरकारले यो झारा टारेजस्तो गरेको हामीलाई महशुस भएको छ। अढाई सय किटले के हुन्छ र? अस्ति एक जनाको ट्रेसिङ केसमा ९० जनाको परीक्षण गरियो। ९० जनाको परीक्षण गर्दा २२ जना भेटिए। २२ जनाको ट्रेसिङ गर्दा अब कति होलान् भन्नुस् त? २२ जनाको ट्रेसिङ गर्दा हजारौंको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अढाइ सय किटले हामीलाई के हुन्छ?
सरकारले ट्रेसिङ गरेर खोज्नुपर्ने बेलामा जनता उनीहरूसँग कुनै न कुनै बेला हाम्रो पनि सम्पर्क भएको थियो भनेर आफै‍ं आइरहेको समयमा पनि जाँच्न सकिएको अवस्था छैन। धेरैले मलाई नै सम्पर्क गरेर नम्बर टिपाउनु भएको छ। हामी त्यो कुराको म्यानेज गर्दै छौं। हामीसँग डकुमेन्ट नभइकन त्यसै ट्रेसिङ गर्न जानु पनि भएन। सबैभन्दा पहिला त संक्रमितको पूरा रिपोर्ट लिनुपर्‌यो। अनि बल्ल हामी ट्रेसिङमा जाने हो। त्यो काम पनि प्रहरीले बल्ल सोमबारबाट प्रहरीले सुरु गरेको छ। हिजो प्रहरीले १२ जनाको रिपोर्ट लिइसकेको र अरुको आजसम्म लिइसक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ।
आठ नम्बर वडामा मात्रै त्यस्तो भयावहस्थिति हुनुको खास कारण के रहेछ?
एउटै कारण हो परीक्षण ढिला हुनु। नेपालगन्ज भनेको भारतसँग सीमाना जोडिएको क्षेत्र हो। यहाँबाट दैनिक सयौं मानिसको आवागमन हुन्छ। लुकिछिपि पनि भारतबाट थुप्रै मान्छे आएका छन्। भारतमा त हामी औषधि उपचार गर्न जान्छौं। हाम्रो चेलीबेटी सम्बन्ध छ। यहाँको बिहे उता उताको बिहे यता आउने हुन्छ।
भारतको कोरोनाले बहावह रुप लिइरहेको अवस्थामा यी यस्ता थुप्रै कारणले नेपालगन्ज पनि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। हामीले यस्तै कारणले भारतबाट आएका सबैको चेकजाँच गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं। हामीले आवाज उठाएको समयमा नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा लिएन। हामीलाई पनि कोही रुघाखोकी लागेको, ज्वरो आएकाहरूको र भारतबाहेका मुलुकबाट आएकाहरूको तत्काल चेकजाँच गर्नु भन्ने सर्कुलर आयो।
हामीले पनि त्यसपछि तेस्रो मुलुकहरूबाट आएका र संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाहरूलाई नै प्राथमिकतामा राख्यौं। अहिले कोरोना देखिएकोमा कोरोनाको कुनै लक्षण नै छैन। यसरी कोरोनाको लक्षण नै नदेखिएको अवस्थामा ग्रास रुटबाटै परीक्षण गर्नुपर्ने देखियो। र, यसले चेकजाँचमै ढिलो भएको पुष्टि गरिदिएको छ।
नेपाल सरकारले लकडाउन गरे पनि त्यसलाई हामीले पनि पूर्ण रुपमा प्रभावकारी बनाउन सकेनौं। यसमा स्थानीयवासीसँगै हाम्रा पनि केही कमी–कमजोरी रहे। यी यस्ता कारणले नै यस्तो अवस्था आएको हो। तर, उहाँहरू सबैमा सामान्य लक्षण छ। सबै खाना खाने, बोल्ने, फोनमै लामो समयसम्म कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसलाई मध्यनगर गरेर हेर्दा डराउनुपर्ने अवस्था नरहे पनि उच्च सावधानी अपनाएर जाँचको दायरा भने बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
तपाइहरूको प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ?
अहिले हामी उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सम्पर्क पनि भइरहेको छ। सोमबार मात्रै हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल यहाँ आउनु भएको थियो। उहाँले अनुगमन गरेर थुप्रै निर्देशन पनि दिनुभएको छ। पर्याप्त मात्रामा नभएर थोरै भए पनि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। प्रदेशकै सहयोगमा हाम्रो यहाँ ल्याव सञ्चालन भएको छ।
केन्द्रीय सांसदहरूसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौं। केन्द्र सरकारले पनि यहाँको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। सोमबार मात्रै कोरोना परिक्षणका लागि अढाई सय किट पठाइदिनु भएको छ।
के त्यो पर्याप्त हो?
होइन। यो पर्याप्त होइन। किनभने केन्द्र सरकारले यो झारा टारेजस्तो गरेको हामीलाई महशुस भएको छ। अढाई सय किटले के हुन्छ र? अस्ति एक जनाको ट्रेसिङ केसमा ९० जनाको परीक्षण गरियो। ९० जनाको परीक्षण गर्दा २२ जना भेटिए। २२ जनाको ट्रेसिङ गर्दा अब कति होलान् भन्नुस् त? २२ जनाको ट्रेसिङ गर्दा हजारौंको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अढाइ सय किटले हामीलाई के हुन्छ? यो नेपाल सरकारको निकै कमजोरी हो। प्रत्यक घर परिवारको स्वाव परीक्षण गरिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारसँग माग गरिरहेका छौं।
यसलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्छ। यही अवस्थामा हामीले परीक्षण गर्न सकनेनौं भने यसले विकराल रुप लिन सक्छ। र, मान्छेमा भय हुन सक्छ। चेक भएर पोजेटिभ देखिए भने त्यस्तो समस्या हुँदैन। किनकि कोरोना देखिएकाहरूको अवस्था नाजुक छैन। तर, यसले भयावह रुप नै लियो भने चाहिँ अवस्था चिन्तजनक हुनसक्ने जोखिम छ।
अब कोरोना अस्पतालको अवस्थाको बारेमा पनि भनिदिनुस् न?
कोरोनाका विरामीको उपचार गर्ने भनेर खजुराको सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई बनाइयो। तर, त्यहाँ २५ वटा मात्रै बेड छ। २३ जना त आजै पुगिसक्यो। उनीहरूको ट्रेसिङ गर्न सुरु गर्‌यो भने यो संख्या त बढ्छ। वृद्धि भयो भने तिनीहरूलाई कहाँ राख्ने? त्यसका लागि खोई सरकारले सोचेको? सम्पर्क, समन्वय भएर पनि खै के हो के हो जस्तो भइरहेको छ। हामी एक्लैले अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउनसक्ने अवस्था छैन। अरुले गम्भीरता पूर्वक लिएको पाइएको छैन। खाली झारा टार्ने काम भइरहेको छ।
त्यसो भए केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको छैन?
प्रदेश सरकारले हिजो आएर अनुगमन गरेको छ। प्रदेश सरकारले कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई कोरोनाको अस्थायी अस्पताल बनाउने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो अनुसार योजना अगाडि बढ्दैछ। तर, पर्याप्त हुनुपर्‌यो भन्ने हाम्रो माग हो।
अस्पतालमा सामग्रीको प्रवन्ध कस्तो छ?
त्यहाँ जम्मा तीन ओटा भेन्टिलेटर छ। आइसियुको पनि समस्या नै छ। पाँच–सात ओटा मात्रै आइसियु छ।
अरु स्वास्थ्य सामग्री के छ?
दुबै कुराको अभाव हो। यो पर्याप्त हुने चिज नै रहेनछ। जति संक्रमित बढ्दै जान्छन्। त्यति नै यो आवश्यक पर्दै जाने हो। हामीले थोरै जनाका लागि भनेर सामग्रीको व्यवस्था गर्न सकेका थियौं। त्यो पर्याप्त छैन। पिपिईदेखि मास्स, ग्लोबगायत सबैको अभाव नै छ। तर, ल्यावको ट्रेनिङ राम्रो भएको छ। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको पनि त्यस्तो धेरै समस्या छैन। तर, पनि चाहिने जति चाहिँ छैनन्। यहाँ करारमा स्टाफ नर्स, चिकित्सक भर्ना गर्ने कुरा भएको थियो। तर, एकदमै कम मात्र आउनु भयो। त्यसैले चिकित्सकहरूको पनि अभाव छ। पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गर्नलाई ल्यावको अभाव छ। जोखिम धेरै छ।
केन्द्र सरकारसँग यसका लागि पहल गर्नुभएको छैन?
हामीले कुरा गरिरहेका छौं। प्रदेश सरबारबाट त हिजो मात्रै मन्त्री आउनु भएको थियो। उहाँसँग कुरा राखेका थियौं। केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नका लागि हाम्रा केन्द्रीय सांसदहरू काठमाडौंमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सहजता प्रदान गरिदिनका लागि अनुरोध गरेका छौं। उहाँहरू खटिराख्नु पनि भएको छ। नगरपालिका आफैले पनि समन्वय गरिरहेको छ र विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर पनि समन्वयका लागि आग्रह गरिरहेको छ।
सीमा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्था कडा होला नि हैन?
हो पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा पनि सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारेका छौं।
हामीले त्यहाँका समस्याका, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका सहयोगका कुरा त गर्‌यौं। तर, तपाइहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त?
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले एकदमै तदारुकता देखाएका छौं। क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गरेका छौं। अहिले क्वारेन्टाइनमा सय जनाजति बस्नुभएको छ। आइसोलेसन अस्थायी अस्पताल भनेर २५ बेडको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका आफैले बनाएको छ। उपमहानगरको १ नम्बर वडामा रहेको लाइफ डेन्टल हस्पिटलमा उक्त अस्पताल निर्माण गरिएको छ।
थप संक्रमित देखिए भने त्यहाँ राख्न मिल्ने गरी पूर्वाधार तयार पारेका छौं। टेस्टका लागि हाम्रो सानो टिम नै खटिएको छ। एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखेका छौं। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक वडामा खटिनु भएको छ। तीन दिन त हामीले अत्यावश्यक वस्तुका पसल पनि बन्द गरेका छौं।
म सम्पूर्ण नगरवासीलाई संयम अपनाइदिन अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा सरकारले जारी गरेका प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गर्छु। अहिले डराउनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। कोरोना पुष्टि भएकाहरूको अवस्था पनि सामान्य नै छ।
निकै समस्यामा परेकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ नि?
यति चुलो नै बल्ने स्थिति भएन भने स्थानीय वडाअध्यक्ष वा वडा प्रतिनिधि मार्फत आउँदा घरघरमै सेवा पुर्‌याउन हामी तयार छौं।
समस्यामा परेकाहरूलाई राहत कसरी उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ?
हामीले दुई चरणमा रातह वितरण गरिसकेका छौं। अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा अहिले नै त्यस्तो परिस्थिति नआउला भन्ने छ। १७ हजारभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई राहत प्रदान गरिसकेका छौं।
यसपछिको अवस्थाको बारेमा कस्तो योजना छ?
हामीले दुई चरणमा दुई प्याकेज वितरण गरिसकेका छौं। यो दुई चरणको मूल्याङ्कन गरेर तेस्रो चरणमा जाने हो। अहिलेसम्म तेस्रो चरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको छैन। यदि त्यस्तो समस्या आयो भने भनेर हामीले नगरपालिकामा एउटा टिम बनाएर छलफल गरिसकेका छौं। यो तीन दिनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा हामीले वडाबाट नै आउन भनेका छौं। त्यसपछि हामी अर्को प्लानिङ गर्छौं।
अर्को कुरा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलगायत सरोकार निकायसँग आवश्यक चिकित्सकिय सामग्रीको उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्छु। यहाँको आइसोलेसन अस्पताल पर्याप्त छैन। त्यसैले चाँडो अर्को आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्यो। यसका यी कुराका लागि कसले कहाँबाट कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्। सबैले सकरात्मक र रचनात्मक सहयोग गरिदिनुपर्यो। साच्चिकै विरामीलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्ने अवस्था आयो भने कहाँ राख्ने त्यस विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकार गम्भीर भइदिन पर्‌यो।